Katekisma - Wikipedia
Ny katekisma na katesizy dia fampianarana ny tahirim-pampianaram-pinoana kristiana ampiasaina ho fitaovana fototra amin' ny fitaizana ny ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe mba hahalala ny hafatra kristiana sy hiaina araka ny maha kristiana azy.
Fampianarana katekisma, sary nataon'i Jules-Alexis Muenier tamin'ny taona 1890.
Ny boky fianarana katekisma na katesizy voasoratra voalohany indrindra anefa dia ilay nosoratan' i Alkoino tamin' ny taonjato faha-8. Narakarahin' ny fanoratana katekisma maro izany nandritra ny taonjato faha-9 ka isan' izany ny an' i Noktetr Labeo tao Saint-Gall any Soisa, sy ny an' i Otfried tany Weissenbourg any any Alsace.
Nisy zavatra tsapan' i Lotera teo amin' ny Kristiana notarihiny, izay azo ampiharina koa amin' ny Katôlika: ny Kristiana tamin' ny taonjato faha-16 dia niaina tamin' ny finoana, namonjy fiangonana, nanana fomba fiaina araka ny lalànan' ny fitondrantena, nanao tonom-bavaka, nefa tsy nahalala izay nataony sy tsy nanana teny ho enti-manazava ny finoany. Koa ny katekisma na katesizy no nameno izany banga izany.
Ny Katôlika dia nanaraka izany zavatra nataon' i Lotera izany ka namokatra katesizy, dia ny Katesizin' i Canisius tamin' ny taona 1555 nandritra ny Kônsily tao Tridentio, ary ny Katesizin' i Bellarmin sy ny Katesizin' ny Kônsilin' i Tridentio) taorian' ny Kônsily tao Tridentio, sy katesizy maro hafa koa, ka ny pretra tamin' izany dia tsy maintsy mampianatra ny ankizy ao amin' ny paroasiny.
2 Ny katekisman' ny fiangonana prôtestanta
2.1 Ny katekisman' ny Fiangonana loterana
2.2 Ny kekisman' ny Fiangonana nohavaozina
2.3 Ny Fiangonan' i Fausto Sozzini
2.4 Ny katekisman' ny Fiangonan' ny Sakaiza
2.5 Ny katekisman' ny Fiangonana presbiteriana
3 Ny katesizin' ny Fiangonana katôlika
Ny teny hoe katekisma na ketesizy dia avy amin' ny matoanteny grika hoe κατηχεĩν / katékhein (ara-bakiteny: "mampitombo faneno") izay midika hoe "mampianatra" sy "mampahalala vaovao". Io matoanteny io dia hita ao amin' ny soratr' i Paoly sy ao amin' ny Evanjelin' i Lioka. Hatramin' ny andiany faharoa tamin' ireo fiangonana kristiana dia nahatsapa ny filana fampianarana ny Kristiana mba handalinana ny finoana azo avy amin' ny fotoana nidirana ho Kristiana. Fanambaràna ny foto-javatra ao amin' ny foto-pampianarana kristiana izany: ny foto-pinoana, ny sakramenta, ny fitondrantena ary ny Vavaka nampianarin' ny Tompo.
Ny katekisman' ny fiangonana prôtestantaHanova
Ny Fanavaozam-piangonana (na Reformasiona) dia niteraka famoronana katekisma maro. Isan' izany ny Ketekisma Kely (na Fotopianarana kely) sy ny Katekisma Lehibe (na Fotopianarana lehibe) nosoratan' i Martin Lotera tamin' ny taona 1529 (ho an' ny Loterana) sy ny Katekisman' i Heidelberg an' ny Fiangonana nohavaozina, ary taty aoriana ny katekisman' i Calvin tamin' ny taona 1538.
Ny katekisman' ny Fiangonana loteranaHanova
Tamin' ny fiantombohan' ny Reformasiona dia nanjary nihananan-danja ny katekisma noho ny fanizingizinan' i Lotera ny amin' ny tokony hanaovana fampianaram-pinoana atokana ho an' ny zaza madinika. Taorian' ny famoahana ny Fanazavana fohy ny didy folo sy ny Foto-pinoana ary ny Rainay nosoratan' i Lotera tamin' ny taona 1520, dia maro ny katekisma nomanin' ny Prôtestanta. Ny famangian' i Lotera ireo fiangonana tany Saksônia anefa tamin' ny taona 1528 dia niteraka ny fanomanana ny Katekisma Lehibe sy ny Katekisma Kely tamin' ny taona 1529. Ity farany ity dia nosoratan' i Lotera manokana ho an' ny raim-pianakaviana sy ny pastora mba hanampiana azy ireo amin' ny fampianarana ny zaza.
Ny kekisman' ny Fiangonana nohavaozinaHanova
Ny nalaza indrindra tamin' ny katekisman' ny Fiangonana nohavaozina dia ny Katekisman' i Jeneva sy ny Katekisman' i Heidelberg, ary koa ny an' i Johannes Häusgen (izay atao hoe koa Johannes Oecolampad) izay teôlôjiana alemàna tao Basel (frantsay: Bâle) tamin' ny taona 1526, ary ny an' i Heinrich Bullinger tao Zurich any Soisa tamin' ny taona 1555.
Ny Katekisma Kely sy ny Katekisma Lehibe tao Jeneva dia nosoratan' i Jean Calvin. Ny Katekisma Kely dia navoaka amin' ny teny frantsay tamin' ny taona 1537, ahitana fanontaniana arahim-baliny. Ny Katekisma Kely kosa dia navoaka amin' ny teny frantsay tamin' ny taona 1541 na 1542.
Ny Katekisman' i Heidelberg dia nosoratan' ny teolojiana alemàna Caspar Olevian sy Zacharias Ursinus tao Heidelberg araka ny fiangavian' i Friedrich III (frantsay: Frédéric III du Palatinat). Navoaka tamin' ny taona 1563 izany. Tamin' ny taona 1619 no nanombohan' ny Fiangonana nohavaozina nampiasa azy.
Ny Fiangonan' i Fausto SozziniHanova
Ireo foto-pampianaram-pinoana prôtestanta manaraka ny fampianaran' i Fausto Sozzini (sotsinianisma) dia hita ao amin' ny Katekisma Lehibe sy ny Katekisma Kely rakôviana (nosoratana tao Raków any Pôlônia tamin' ny taona 1605) izay mandà ny fampianarana ny amin' ny Trinite.
Ny katekisman' ny Fiangonan' ny SakaizaHanova
Ankoatry katekisma voasoratra tamin' ny taona 1660 izay miendrika resaka ifamalian' ny ray sy ny zanaka sady heverina ho nosoratan' i George Fox, ilay nanorina ny Fiangonan'ny Sakaiza (na Frenjy na Koakera), dia manana katekisma nosoratan' i Robert Barclay tamin' ny taona 1673 koa ny Sakaiza.
Ny katekisman' ny Fiangonana presbiterianaHanova
Ny katekisman' ny Fiangonan' i Angletera dia lahatsoratra voafintina natsofoka tao amin' ny Book of Common Prayer ("Bokin' ny vavaka iombonana") izay natonta voalohany tamin' ny andron' i Edward VI (nanjaka teo anelanelan' ny taona 1547 sy 1553) nefa natao ho mirakitra fampianaran-diso izany tamin' ny andron' i Mary I (nanjaka teo anelanelan' ny taona 1553 sy 1558). Nisy fanitsiana natao matetika ilay katekisma teo anelanelan' ny taona 1594 sy 1661. Nisy karazany roa, araka ny mahazatra izany, ka nahitana Katekisma Kely sy Katekisma Lehibe izay lasa katekisma filamatra teo amin' ny Fiangonana presbiteriana, miaraka amin' ny Fiekem-pinoan' i Westminster, izay namboarina tao Westminster teo anelanelan' ny taona 1645 sy 1652.
Ny katesizin' ny Fiangonana katôlikaHanova
Ao amin' ny Fiangonana katôlika tao amin' ny Kônsilin' i Tridentio (na Kônsilin' i Trenta) no nanomanana ny katekisma na katesizy izay navoaka tamin' ny taona 1566, dia ilay atao hoe Katesizy Rômanina na Katesizin' i Pio V. Io katesizy io dia famintinana amin' ny fomba mifatratra ny foto-pampianarana ka natao hanampiana ny pretra sy ny mpampianatra. Nisy koa ny katesizy natao hanampiana ny olon-tsotra izay nomanin' ilay zezoita alemàna atao hoe Petrus Canisius sady navoaka tamin' ny taona 1555 hatramin' ny 1558. Tamin' ny taona 1597 dia namoaka ny Foto-pampianarana Kristiana Fohy i Roberto Francesco Romolo Bellarmino (frantsay: Robert Bellarmin) izay namelarany ny fampianaran' i Jesoa-Kristy araka ny fahazoan' ny Fiangonana katôlika an' izany tamin' ny fotoana nifanoherany tamin' ny Fiangonana nohavaozina. I Joany Paoly II dia nampamoaka katesizy vaovao ho an' ny Fiangonana katôlika maneran-tany tamin' ny taona 1992 izay nomanin' ny kardinaly Joseph Ratzinger (ilay lasa papa Benoà XVI) sy ny ekipa niaraka aminy, sady nadika tamin' ireo fiteny be mpampiasa indrindra, tsy inona izany fa ny Katesizin' ny Fiangonana Katôlika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Katekisma&oldid=1014542"
Dernière modification le 11 Aogositra 2021, à 11:46
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 11:46 ity pejy ity.